राष्ट्रियताको आधार : बहस कि व्यवहार ?
नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको बहस व्यापक बन्दै गर्दा फरक÷फरक धारणा आउँदैछन् । केही समाजशास्त्रीले राष्ट्रियतालाई अङ्ग्रेजी शब्द ‘नेशनालिटी’ को अनुवादका रूपमा बुझाउँदा यसको चीरहरण हँुदैछ । ‘बाबुआमाको सेवा गर्नु सन्तानको धर्म हो’ को अनुवाद ‘सर्भिङ द प्यारेन्ट्स इज चिल्ड्रेनस् रिलिजन’ हुन सक्दैन । पूर्वीय दर्शनमा धर्मलाई कोरा परम्परा (रिचुअल) सँग नभई दायित्व (डियुटी) सँग जोडिन्छ । हामीमा अभिभावक र सन्ततीबीच औपचारिक नभई अद्वितीय आत्मिक सम्बन्ध हुन्छ । पश्चिमा सन्तानलाई बोझ मान्छन्, हामी गहना ठान्छाँै । हिजोआज अधिकांश उनीहरू परिवारप्रति नकारात्मक छन् । विवाह गर्दैनन्, गर्नेहरू पनि बच्चा जन्माउँदैनन्, भ्रूणहत्या गर्छन्, थुप्रैले सरोगेसी गर्छन् । जन्माउनेले पनि आफूले हैन भाडाका मानिसबाट स्याहार गराउँछन् । बच्चाले बाबुआमाको स्नेह र आलिङ्गन पाएको हुँदैन, बच्चाले पनि बाबुआमालाई सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य ठान्दैन । बाबुआमाको सेवा हामीलाई दायित्व हो, उनीहरूलाई औपचारिकता मात्र, तसर्थ हामीमा धर्मको भाव फरक छ । बुद्धको ‘धर्म’ र प्राचीन दार्शनिक मनुको ‘राजधर्म’ का सिद्धान्तहरूले यसलाई प्रस्ट्याउँछ । ‘ट्रान्सलेसन अर मिसट्रान्सलेसन’ नामक लेखमा निराद सी चौधरी भन्नुहुन्छ ‘अनुवादले भावनासँगै व्यावहारिक समानता नबोकेमा त्यो घातक र बेअर्थको हुन्छ’ । ‘नेशनालिटी’ को अनुवादलाई राष्ट्रियता बुझ्नु नै समस्याको पहिलो जड हो ।
बुझाइमा समस्याहिंसाका अनेकौँ रूपमध्ये ज्ञानको हिंसा (इपिस्थेमिक भ्वाइलेन्स) प्रमुख हो । यहाँ प्रजातन्त्र, मानव–अधिकार लगायत राष्ट्रियतामाथि समेत पश्चिमी अवधारणालाई अन्धभक्त रूपमा स्वीकारिदैछ । केवल परिचय–पत्रमा आफू जन्मेको ठाँउ उल्लेख गर्नु नभई राष्ट्रियता उक्त ठाउँ र संस्कृतिको निरन्तर माया, सम्बद्र्धन र समृद्धिकोे सत्कर्म हो । कविता वा स्ट्याटसमा लेखेर राष्ट्रियताको जर्गेना हुँदैन । जन्मिएका कारणले हैन, दायित्व निवारणका आधारले राष्ट्रियता प्रस्टिन्छ ।
राष्ट्रियताका तर्कलाई दमदार देखाउन राजनीतिकर्मी अरूको उछितो काड्ने अनि विद्वान् विश्वविद्यालयमा उष्ण बहस पैरवी गर्नेमा तम्सन्छन् । गुलाव नाम दिँदैमा गोबरबाट सुवासना प्रसारित हँुदैन भनेजस्तै तर्कका प्रवचनले मात्र राष्ट्रियता निर्माण हुँदैन । राष्ट्रियता नेताले दिने र नागरिकले माग्ने एकोहोरो विषय पनि हैन । राष्ट्रियता दाबी नभई प्रदर्शन गर्ने अनि माग्ने नभई कमाउने विषय हो । अभिव्यक्ति कम र आचरण बढीको सरोकार हो ।
राष्ट्रियताको व्यावहारिक निर्माण सबैबाट माटोप्रतिको मायासँगै जिम्मेवारीको सफल सम्पादन राष्ट्रियताको मुख्य आधारशीला हो । यसमा नेतृत्व राष्ट्रवादी र नागरिक देशभक्त हुनुपर्छ । इतिहास अनि माटो बिर्सिनेसँग राष्ट्रियता हँुदैन । बहसमा हैन, राष्ट्रियता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । आत्मसम्मान र सामथ्र्य कमजोर भएमा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । जसरी व्यापार अनि मुनाफा घटेमा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्छ राष्ट्र कमजोर भएपछि राष्ट्रियता त्यसरी नै स्खलित हुन्छ । सेयर बजारको दैनिक सूचाङ्क हेर्दैमा मूल्य बढ्दैन, सबै मिलेर कम्पनीलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका लागि सबैले मिलेर देशलाई सबल र सक्षम बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । देश सानो वा ठूलो हुँदैमा राष्ट्रियतामा फरक पर्दैन तर राष्ट्रियता माग्ने हैन कमाउने विषय हो । पहिले आन्तरिक प्रगतिलाई चुस्त पार्नुपर्छ । डिल्लीरमण रेग्मीको ‘अनुभव र अनुभुति’ अनि सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ पुस्तकमा विगतमा हामो राष्ट्रियता कति अब्बल थियो भन्ने लोभलाग्दो सप्रमाण वर्णन छ ।
राष्ट्रियता सबै देशभक्त नागरिक मिलेर प्रश्रय गर्ने सामरिक समृद्धि अनि मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि र सम्पत्ति हो । देशलाई आर्थिक हिसाबले सबल र आत्मनिर्भर बनाऔँ । अधिक कलकारखाना खोलौँ र व्यापक रोजगारी बढाऔँ । सम्भावित सबै खनिज तथा स्रोत÷साधनको अधिकत्तम दोहन गरौँ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ । कर्मचारीले जागिरे प्रवृत्ति नदेखाऔँ । चाणक्य ‘अर्थशास्त्र’ मा लेख्नुहुन्छ ‘माछाले पानी र कर्मचारीले घुस कत्तिखेर खान्छ भन्ने देखिँदैन’ । अहिले पनि सरकारी कर्मचारीमाथि आम–धारणा सकरात्मक छैन । यसलाई परिवर्तन गराऔँ । हाम्रो विराट संस्कृति र सभ्यतालाई जोगाऔँ । नागरिकका प्रतिनिधिले वास्तवमा नै जनताको सेवा गरौँ । स्थानीय र प्रदेशका सरकार आफ्नो क्षेत्रलाई अब्बल बनाउन तल्लीन बनून् । अबको समयमा राजनीतिक शक्ति अनि युद्धपोत सट्टा व्यापार तथा वाणिज्यबाट अरू देशमाथि आधिपत्य जमाउन सहज हुन्छ । आक्रमक विश्व व्यापारका लागि चीनबाट बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) तथा भारत एवं जापानबाट एसिया–अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर
(एएजिसी) नामक महìवाकांक्षी अवधारणा आए । दुवै देशले अथाहा उत्पादन र अकल्पनीय व्यापार गर्नेछन् । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले यस्तै गरी देशलाई आर्थिक हिसाबले सबल बनाउने अनि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गराउने नयाँ र मौलिक योजना तयार गरोस् ।
न्यायालयलाई नागरिकको भरोसा र सम्मानयोग्य बनाउनु वर्तमानको आवश्यकता भएजस्तै समृद्ध शिक्षा अर्को महìवपूर्ण पाटो हो । यो देशमा काम छैन, लक्ष नै विदेश जानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई आमजनमानसको मानसपटलबाट मेटाउने प्रयास हुनुपर्छ । यही भविष्य देखाऔँ, आफू पनि यही माटोमा दुःख गर्न सिकौँ । अमेरिकासँग केवल ४०० वर्षको इतिहास छ । हाम्रो समाजमा सामान्य भेदभाव हुँदा त्यहाँ क्रुर शोषण र दास प्रथा थियो । २५० वर्ष पहिले अष्ट्रेलियाको कुनै नाम÷निशान थिएन । हामीसँग ५००० वर्ष लामो वैज्ञानिक सभ्यता छ । बुद्धबाट प्रसारित ‘सत्कर्म, पञ्चशील, अष्ठशील, दशशील’, मनुको ‘राजधर्म’, कौटिल्यको ‘सप्तांग’ अवधारणाले पूर्वीय समाजभित्रको हाम्रो देश समृद्ध थियोे ।
त्यसैले, सबैले आफ्नो सार्मथ्य चिनेर कुनै न कुनै सत्कर्म गर्ने कार्य गरिनुपर्छ । समाज र देशलाई अधिक फाइदा पुग्ने गरी कार्यसम्पादनको जिम्मेवारीलाई महìवपूर्णरूपमा लिइनुपर्छ । वैभवशाली देशको सपना देख्नु नै यसलाई सार्थक बनाउने पहिलो कदम हो, यसलाई परिपूर्ति सबैले आफ्ना काम गर्नुपर्छ । अति उपोभोक्तावादी संस्कृतिले हामी आफ्ना सामान सस्तोमा बेचेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन खरिद गर्दै आफैँलाई गरिब बनाइरहेछौँ । आप बेचेर जुस किन्ने अनि दही÷मही त्यागेर विदेशी कोल्ड ड्रिन्स र ह्विस्कीका पछि लाग्ने सामाजिक विकृतिको विकास हामीले गरिसकेका छौँ । पूर्वीय दर्शनमा दीप प्रज्वलनलाई उत्साह, उमङ्ग तथा शुभका रूपमा लिइन्छ तर अहिले हामी जन्मदिनमा बत्ती निभाउने नमिल्दो कुराको नक्कल गरिरहेका छौँ । अरूको अन्धभक्त नक्कलले हाम्रो परिचय सकिँदैछ ।
लिच्छवि कालमा तिब्बतसँग नेपालको राम्रो व्यापार थियो, हाम्रो सम्मान थियो । जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँकी महारानी बराबरको सलामी माग्ने हैसियत थियोे । नेपालले तिब्बत, बेलायत, इरान, अफगानस्तान लगायत केही देशलाई व्यापारसँगै प्रशस्तै आर्थिक सहयोगसमेत दिन्थ्यो । नेपालको आफ्नै भेष÷भुषा, भाषा, फरक खानपिन, संस्कृति, छुट्टै परिचय अनि सम्मानित पहिचान थियो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा गएका झन्डै तीन लाख नेपाली सिपाहीमा अधिकांशको मृत्यु भयो । यसले देशभित्रको जनसङ्ख्यामा भीमकाय असन्तुलन निम्त्यायो । केही जीवित विशाल धनरासी लिएर फर्किए, विस्तारै श्रम गर्ने र आत्मनिर्भर हुने प्रवृत्तिमा ह्रास आउन शुरु भयो ।
अहिले हामी सिनेमा अरूको हेर्छौं, खाना अरूको खान्छौँ, पोशाक अरूको नक्कल गर्छौं, देशलाई अरूसँग भीख मागेर चलाउँछौँ अनि कसरी बाँच्छ राष्ट्रियता ? बुद्ध, पारुहाँग अनि फेदाम्बा बिर्सिएर यशु क्राइष्ट पुज्छौँ । दालभात अचारभन्दा बासी पिज्जा, पाउरोटीको लालचामा रम्छौँ । सिभी (व्यक्तिगत विवरण) भन्दा डिभी
(अमेरिकी आप्रवासन चिठ्ठा) मा समय दिन्छौँ । अरूको देशलाई सबल र नागरिकलाई विशिष्ठ सम्झन्छौँ । आफूलाई कमजोर र देशलाई खत्तम सम्झदै निरास हुन्छाँै । हाम्रो मौलिक परिचय अरूसँग विलीन हँुदैछ । निराशाले हैन, आशा, भरोसा अनि प्रयासले मात्र देशको राष्ट्रियता सबल हुन्छ ।
युरोपमा पेट्रोलको अनावश्यक प्रयोगलाई अपराध जस्तै मानिन्छ । मानिस हिँड्न रुचाउँछन् । हामी वर्षको झण्डै दुई खर्ब रुपियाँको तेल किन्छौँ । हाम्रैमा उत्पादन नभएका कुराको फजुल खपत नगर्ने बानी बसाल्नु अहिले आवश्यकता हो । राज्यको आम्दानी बढेपछि नागरिकमाथि खर्च गर्नसक्छ । मुद्रा पलायनलाई सकेसम्म रोक्नुपर्छ । उपचार गर्न विदेशिँदा गएको पैसाले यही थुपै्र राम्रा अस्पताल बनाउनेतर्फ निजी क्षेत्र तथा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । युवा पढ्न जाँदा वार्षिक झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ विदेशिएको तथ्याङ्क छ । त्यसले यही दर्जनौँ आधुनिक विश्वविद्यालय बनाऔँ ।
यस विश्लेषणबाट भन्न सकिन्छ राष्ट्रियताको निर्माण छलफलले हुँदैन, व्यवहारले दिशावोध हुनुपर्छ । परिचय–पत्रमा जन्मेको ठाउँ लेख्ने कोरा प्रवृत्तिलाई राष्ट्रियता मान्न सकिँदैन । राष्ट्रियतामा उक्त ठाउँको माया हुनुपर्छ । जसरी बाबुआमाप्रति पे्रम भएका सन्ततीले उनीहरूलाई सेवा, सद्भाव, स्याहार, आदर अनि सामीप्यताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ त्यसरी नै राष्ट्रियताको माया गर्नेले निबन्ध मात्र लेख्ने नभई राष्ट्रको सेवा, आदर, संरक्षण अनि सम्बद्र्धनमा योगदान गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताको खोजीमा विचारभन्दा व्यवहारको जर्गेनालाई जोड दिनुपर्छ । नेतृत्वको राष्ट्रवादी सोचसँगै नागरिकको देशभक्ति र देशप्रेमका व्यवहारले मात्र राष्ट्रियतालाई जोगाउन सकिन्छ । नेतृत्वले सोच अनि नागरिकले व्यवहार बदलेर प्रयास थाल्नुपर्छ । नेतृत्वबाट प्रगतिशील नीति नियम आउनुपर्छ, नागरिकले त्यसलाई सगौरव अपनाउनुपर्छ ।